Public Health in Myanmar: For better tomorrow
အခုဆရာဝန်လောက မှာ တဖြည်းဖြည်း မျိုးဆက်ပြတ်လာပြီ။ ၉၀ ပြည့်နှစ် မတိုင်မီက ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေနောက်ပိုင်းမှာ ထူးချွန်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ပေါ်ထွက်တာ အရမ်းနည်းသွားပြီ။ ဆရာဝန်အရေအတွက် များလာပေမယ့် အရေအချင်းပိုင်းက ရှေ့ပိုင်းက ဆရာဝန်တွေကို မမှီဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ မမှီရတာလဲလို့တော့ မမေးနဲ့နော်။ ကျွန်တော် အပြင်မှာ နေချင်သေးတယ်။ ကျန်းမာရေး စနစ်တစ်ခုမှာ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်က အများစုပါဝင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ အရင်ဆုံးထိတွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့နေလူအများစုက ရိုးရိုးဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ကို မတင်းတိန်ကြဘူး။ ဒါကလည်း ရှင်းပါတယ်။ input ထည့်သလောက် output မထွက်လာလို့ပေါ့။ အဲဒီတော့ အထူးကု တွေဆီမှာ မလိုအပ်ဘဲ လူနာတွေပုံလာတယ်။ တစ်ချို့အထူးကုတွေကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။ လူနာသိပ်မများခင်တုန်းက လူနာတွေကို အချိန်ပေးပြီး သေချာကြည့်တယ်။ အခုလူနာလည်း များလာကော ၁ မိနစ်ကလေးတောင် မကြည့်တော့ဘူး။ ပြောင်းလဲသွားတာပြောတာပါ။ demand များလာရင် ဈေးကိုင်တာ လူ့သဘာဝပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ အကျင့်က ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာမတက်မချင်း ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်။ စည်းကမ်းမကျလည်း ပြဿနာ မရှိဘူး။ ပြဿနာ လည်းတက်ရော အပြစ်ပြောလို့ မဆုံးတော့ဘူး။ ဒီကောင်မလေးကိစ္စမှာ ဆရာဝန်ကြီးက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ အခုမှာ ဖြစ်လာတဲ့ကစ္စ မဟုတ်ဘူး။ အရင်တုန်းကတည်းက လျော့တည့်လျော့လုပ်လာတာ က ပြဿနာ မတက်သေးတော့ လူနာတွေက complaint မလုပ်ကြဘူး။ အခုလူနာလဲသေရော ပြဿနာတွေတက်ကြပြီ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လူတွေကလည်း ကောင်းဖို့လို့သလို စနစ်ကလည်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ objective ကျကျမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ လတ်တလော ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာ တော့ရှင်းပါတယ်။ မပြောတော့ဘူး။ နောင်အရှေအတွက် ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာတွေကတော့ အများသား။ အဲဒီ ကျင့်ဝတ်မညီပါဘူးဆိုတဲ့ ဆ၇ာဝန်ကြီးတွေ အနားယူသွားကြပြီး နောက်ထပ်ဆရာဝန်တွေက သူတို့ရဲ့ နေရာကို မဖြည့်နိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ MPCR တို့ MRCS တို့ရဖို့ဆိုတာ အရင်ကထက် ဆယ်ဆလောက်ပိုခက်လာပါပြီ။ အဲဒီတော့ အရှည်ကိုတွေးပြီး ကောင်းစေချင်ရင် ဆရာဝန်အငယ်တွေကို ပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပျိုးထောင်ရမလဲဆိုတာကို မနေ့ကပဲ အကြီးအကျယ် ငြင်းခဲ့ခုန်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ မနေ့က ကျွန်တော် point outလုပ်သွားတဲ့ comment လေးတွေကို ပြန်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။
၂၀၁၀ ပြီးရင် private ဆေးကျောင်းတွေပေါ်လာပါတော့မယ်။ ဆရာဝန် တွေကိုလည်း တရားဆွဲလို့ရတော့မယ်။ (အခုလည်းရပါတယ်) ဆေးကုသစရိတ်တွေ လူနေမှုစရိတ်တွေ ထပ်မံတက်လာမည်။ ကျန်းမာရေးစနစ်ဆိုတာ လူမှုရေးအဆင့်အတန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းမတက်လာမချင်း ကျန်းမာရေးစနစ်သည် လုံးဝကောင်းလာစရာမရှိပါ။ အာမခံပါသည်။ မယုံက eco မှာ professor များကို သွားရောက်မေးနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစနစ်မကောင်းပါက ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဆေးရုံတွေလည်းကောင်းလာစရာ မရှိပါ။
ကျန်းမာရေးစနစ်မတိုးတက်ရင်လည်း စီးပွားရေးက မတိုးတက်နိုင်။ ကျန်းမာရေးစနစ်တိုးတက်ဖို့သည် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ့ရဲ့ ၀င်ငွေကောင်းဖို့လိုပါသည်။ ကျွန်တော်၏ ဆွေးနွေးချက်သည် ဆေးကုသောဆ၇ာဝန်တစ်ယောက်၏ ရှုထောင့်မှာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးကုပြီး ငွေရှာ သောဆရာဝန်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ health economics ရှုထောင့်မှ ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်ပရိသတ်တွေက ဆရာဝန်တွေကို အခုထက်ပိုပြီး လူနာတွေအပေါ်မှာ ကောင်းစေချင်ကြသည်။ ဒါကလည်း သဘာဝကျပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်စေရန်အတွက် အပြစ်ပြောနေရုံနဲ့တော့ မပြီးပါ။ ပြည်သူတွေလည်း ပိုက်ပိုက်ရှိလာမည်။ ဆရာဝန်ကလည်း ဒီအလုပ်ထဲမှာ ပဲ စောက်ချပြီးလုပ်နိုင်လောက်အောင် ထိုက်သင့်သော ၀င်ငွေရှိလာမည် ဆိုပါက ပြည်သူတွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့အခြေအနေကို ပိုရောက် လာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရောဂါအများစုကို အခြေခံဆရာဝန်တွေက ကြည့်ပြီး ခက်ခဲသော ရောဂါအနည်းစုကိုသာ အထူးကုတွေက ကြည့်သင့်သည်။
ဆရာဝန်ဆိုတာ ၀င်ငွေနည်းလည်း စေတနာရှေ့ထားပြီး အလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုသော ဆိုရှယ်လစ်ခောတ်က အယူအဆများကို ကျွန်တော်လက်မခံပါ။ အပြင်မှာလည်း တကယ်သုံးလို့မရပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးတွင် လည်း အကျိုး မပြုနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆရာဝန်ဆိုတာ လူသာမန်ပါ။ လူသာမန်လို လောဘရှိပါတယ်။ Abraham Maslow ရဲ့ Hierarchy of needs မှာ ပါဝင်တဲ့ self actualization ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပဲ လုပ်ပြီး ဘ၀ကို ရပ်တည်နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းရှားတယ်။
ဥပမာ။ ။ Mother Teresa။ ထိုသို့လူများသည် အရေအတွက် နည်းသောကြောင့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ အသုံးပြုလို့မရပါ။ အဲဒီတော့ လူသာမန်တွေကို professional doctor ဖြစ်အောင်ပဲ မွေးထုတ်ပေးလို့ရပါမယ်။ democracy စနစ်တွင် လူတိုင်းလူတိုင်းသည် ကြိုးစားအားထုတ်သလောက် ၀င်ငွေရှိရမည်။ အဲဒါမှလည်း တရားမှပေါ့။
private နဲ့ public ဆရာဝန်တွေကို သက်သက်ဆီခွဲမှ သာ အဆင်ပြောတော့မည်။ ပညာရေးစနစ်လိုပေါ့။ ၀င်ငွေကောင်းလိုသူသည် private တွင်ကုမည်။ research ဒါမှမဟုတ် teaching ကို စိတ်ဝင်စားသူက public ဆေးရုံတွေမှာ ကုမည်။ public ဆေးရုံတွေဟာ လိုရှိထက်ကို fund တွေအများကြီးရှိဖို့ ပိုလိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။ အဲဒီလိုသာ မခွဲပါက ဆရာဝန်များ work life balance မမျှနိုင်ပါ။
ထိုသို့မမျှပါက ကုသရေးတွင် လစ်ဟင်းမှုများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဆွေးနွေးချက်များကို သဘောမတူပါက ကျေးဇူးပြုပြီး လုံလောက်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များနဲ့ ငြင်းပေးပါခင်ဗျာ။ personal တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ကြပါနဲ့။ မြန်မာတို့သည် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြော၍ရသော လူမျိုး ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ legal system ရှုထောင့်မှ ထပ်မံရေးပါမည်။
MRCP ကို MCPR ဆိုပြီး စာလုံးပေါင်းမှားရေးထားသည့်အတွက် တောင်းပန်ပါသည်
ရုပ်လုံးပေါ်တဲ့အထိ ဆက်ပါလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။ သေသေချာချာ ဖတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
ဒီကိစ္စကို ကြားကြားချင်း ကာယကံရှင် မိသားစုအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ် ကြီးကြီး ဘယ်သူကမှတော့ ကိုယ်ချစ်သူခင်သူကို သေစေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီလို အခြေအနေနဲ့ပေါ့။ မသေစေချင်လို့ ဆေးရုံကို ပို့တာ မဟုတ်လား။
ဒီလို ၀မ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ရပ်မျိုးကို သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ရေးခွင့် ခုမှ ဘာလို့ ရသလဲ ဆိုတာတော့ အံ့သြမိတာ အမှန်ပဲ။ Why now? ဆိုတာ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ထားပါတော့။ အများစုလည်း မူလပို့စ်မှာရော ဆင့်ပွါးပို့စ်တွေမှာပါ အတော် ရေးပြီး နေကြပါပြီ။ အင်မတန် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတာတွေလည်း ဖတ်ပြီးကြမှာပါ။
မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောရရင် ဒီဆိုဒ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ရင်လာဖွင့်လို့ ရတာကို ကောင်းတယ်လို့ အသိအမှတ် ပြုသူတွေ ရှိသလို ဆရာဝန်တွေ ရေးတဲ့ဆိုဒ်မို့ ဆရာဝန်ချင်း ပင်းတယ်လို့ မလေ့မလာ စွပ်စွဲသွားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ဒီလို အရမ်းမဲ့ သုံးတာကတော့ စိတ်ပျက်စရာပဲ။ ပြင်ရမယ့်အထဲ ဒီအကျင့်လည်း ပါတယ်။
ကိုဇီဝက ပြောသလို ကိုယ့်လူမျိုးဟာ မနိုင်တုံးတော့ ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီး၊ နိုင်မယ့်ပုံ ပေါ်တာနဲ့ ဒေါသရှေ့ထား ရမ်းကားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ အောင့်အည်းခံခဲ့ရတဲ့ မြိုသိပ်ခြင်းတွေရဲ့ ထွက်ပေါက် မှန်ပေမယ့် မျှတတဲ့ သမာသမတ်စနစ် တခုကို ရေရှည် လိုချင်ရင် ဒီနည်းက အဖြေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို နောက်ဆုံးပိတ်မှ ပေါက်ကွဲတဲ့ အကျင့်မျိုး ကျွန်မတို့ အတော်များများမှာ အနည်းနဲ့အများ ဆိုသလို ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ်ကိစ္စလေးတွေမှာမှ အစပြုလို့ပေါ့။ ဒါကို သတိထားပြီး ပြင်သင့်တယ်။ ပြင်လည်း ပြင်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ခုကိစ္စမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း ချပြီးသွားပြီမို့ ဘာမှ သိပ်မပြောချင်ပါဘူး။ ဆရာကြီး ဦးကြည်စိုးဟာ အတွေ့အကြုံရင့်၊ စာသင်ကောင်း၊ တပည့်များအပေါ် မအော်မငေါက်တဲ့ ဆရာတယောက်အနေနဲ့ သိထားခဲ့တာမို့ ဒီကိစ္စမျိုး သူ့မှာမှ ဖြစ်ရလေလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ သို့သော် တခါမှ မမှားဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူးရယ်လို့တော့ တသမတ်တည်း မျက်စိမှိတ် ယုံကြည်လို့ မရဘူး။
ကိုဇီဝကရဲ့ အမေးအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေ ကျွန်မမှာ မရှိပါဘူး။ အဓိက ဖြည့်စွက်ချင်တာကတော့ ဒီကိစ္စကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ လူနာ ဆိုတဲ့ လူနှစ်စုအကြား မယုံကြည်မှု၊ သံသယ၊ နာကျည်းမှုတွေ မပွါးစေချင်တာပါပဲ။ စေတနာနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ပေးဆပ်နေတဲ့ ဆရာဝန် ကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်တက်လာမယ့် ဆရာဝန်သစ်လေးတွေကိုလည်း စိတ်ဓာတ်မကျစေချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြင်ရမှာတွေ ရှိတယ်။
လူနာကို အချိန်မပေးပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာကတော့ ပြဿနာကို ဖိတ်ခေါ်နေတာပဲ။ လူနာက ဆရာ့သဘောပါလို့ ပြောတာ ပြောမှာပဲ၊ သူ မသိလို့ ကိုယ့်ဆီလာတာပဲလေ။ သိအောင် ပြောပြရမှာ ကိုယ့်တာဝန်။ သူ ဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်အောင် သိလာဖို့ ကူညီရမှာက ကိုယ့်တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ Informed consent ဟာ အနှစ်ပါပဲ။
လူနာဖက်ကလည်း ပြောတာတွေကို လိုက်နားထောင် စဉ်းစားရပါမယ်။ သူ ဆုံးဖြတ်တာ ခံလိုက်မယ်လို့ ပြီးစလွယ် ပြောလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ အသက်ကို ကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီအယူအဆကို မယဉ်ပါးရခြင်းကတော့ တခြား အကြောင်းတွေကြောင့်ပါ။
ခုကိစ္စနောက်ပိုင်း လူနာတွေခမျာ ဆရာဝန်ဆီ သွားရမှာ ဘယ်လောက်တောင် တွန့်ဆုတ်ကုန်ကြမလဲ။ ငွေလည်းကုန်၊ အသက်လည်းဆုံး၊ ဘာများ ကောင်းတာ ကျန်လို့လဲ။ သေမယ့်အတူတူ ငွေမကုန်ပဲ အိမ်မှာပဲ သေတော့မယ် ဆိုတာတွေ ထပ်တိုးလာမလား။
ဆရာဝန်ကောင်းတွေခမျာလည်း အင်း ငါတော့ ဘယ်နေ့ ပြဿနာ ရှာခံရမလဲလို့ တွေးတောကြောက်ရွံ့ပြီး အလုပ်ကို မပျော်မမွေ့ ဖြစ်လာမလား။ ငါကတော့ မတရား တိုင်ခံရရင်တောင် ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိတာနဲ့ပဲ ကိစ္စချောသွားနိုင်တယ်လို့ မဆီမဆိုင်တာတွေအတွက်ပါ ထည့်ပူနေရမလား။
လူနာနဲ့ သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကြေရင်၊ ကိုယ့်ဖက်က မှန်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာ မလိုအောင် (လူနာဖက်က) မေးမြန်းနိုင်၊ (ဆရာဝန်ဖက်က) ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ မျှတတဲ့၊ ဘက်မလိုက်တဲ့၊ ပွင့်လင်းတဲ့ စနစ်တခု အမှန်ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါနဲ့အတူ တိကျမှန်ကန်တဲ့ ဆေးမှတ်တမ်း ထားရှိထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ကုသမှု အရေးကြီးရင် ကြီးသလို သေသေချာချာ ရှင်းပြဖို့နဲ့ ဆေးမှတ်တမ်း ရှည်ရှည်လျားလျား မှန်မှန်ကန်ကန် ရေးဖို့ လိုလာမယ်။ ပြဿနာ တစုံတရာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဒါဟာ သက်သေ ဖြစ်လာမှာမို့ပဲ။
ပြဿနာ ဖြစ်ခါမှ ရုတ်တရက် ခြေဆတ်တုံ့ပြန်ခြင်း (knee-jerk reaction) ဟာ အဓိပ္ပါယ် မရှိပေမယ့် မကြာခဏ ဖြစ်တတ်လို့ ဂရုစိုက် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ၁၉၉၀ စွန်းစနှစ်တွေက မင်းသမီးတယောက် သရုပ်ပျက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ဖျော်ဖြေခွင့်လိုင်စင် ငါးနှစ် ပိတ်ခံရတာ ပြန်သတိရသွားတယ်။ သူ့ထက် ဆိုးတဲ့သူတွေကျတော့ ပန်းပန်လို့။ နောက်ခဏနေတော့လည်း အားလုံး ဒုံရင်း ဒုံရင်း ပြန်ရောက်တာပဲ။ ခုတော့ အဲဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့ သရုပ်ပျက်မှုတွေက ရေတွက်မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲလား။
ဒါမျိုး ဖြစ်မသွားအောင်တော့ အားလုံး ၀ိုင်းထိန်းရလိမ့်မယ်။ စနစ်တခုရဲ့ သားကောင်အချင်းချင်း ဖေးမပြုပြင် လမ်းကြောင်းပြောင်း ယူရမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ကတော့ အချိန်က စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ အတွေးပွါးစေတဲ့ ပို့စ်တွေအတွက် သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်ထပ်ကြားတဲ့သတင်းကတာ့ ဒီ SSC case ဟာ လူနာရဲ့မိခင် ဂျာနယ်တိုက်ကို စာရေးသားပေးပို့သလို မဟုတ်ဘူးလို့ကြားသိရပါတယ်။ solid evidence မဟုတ်တဲ့အတွက် post တစ်ခုအနေနဲ့ မရေးတော့ပါ။ ဆရာ့ရဲ့ လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီက ကြားတာပါ။
ဟာသအနေနဲ့ ပြောတာရှိတယ်.. ဆရာဝန်မှားရင် (တစ်ကြိမ်မှာ) တယောက်ပဲ သေပါတယ်။ (အိုဂျီမှားရင်တော့ ကလေးကော အမေပါ သေနိုင်ပါတယ်.. စကားချပ်)။ ဘတ်စ်ကား ဒရိုင်ဘာမှားရင် တကားလုံးသေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းရံဆရာမှားရင်လည်း တတိုက်လုံးပြိုကျပါမယ်.. စသည်ဖြင့်ပေါ့.. အဲဒါကြောင့် လုပ်မှားကိုင်မှားဖြစ်ခဲ့ရင် သူတပါးအသက်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆရာဝန်အလုပ်ကို ကျနော်တို့လို ခပ်ညံ့ ညံ့ ကောင်တွေလုပ်နေတာပေါ့..
အဲဒါခပ်ညံ့ညံ့မဟုတ်ဘူးဗျ။ နှလုံးရည် ပြည်ဝတယ်လို့ခေါ်တယ်။ :-P
I can't help myself laughing after reading your comment. :-) Well, great effort!
အိုင်ဆေး ဖောလက်စ နဲ့ ထပ်ပြီး ပွားချင်သေးတယ်။ ဟို ကွန်မင့် တခု ကိုလည်း သိပ်ကြိုက် တယ်။ ဆရာဝန်တွေ ဆရာက ဆရာက နဲ့ ပြောတဲ့ ကိစ္စ၊ ဟုတ်ပါရဲ့မြင်ပြင်းကပ် စရာ။ မသကာ ဝန်ကလေ ဝန်ကလေ လို့ပြောကြပါလား။ ဒေါက်ဒေါက်တွေကို ကြည့်မရတဲ့ အထဲမှာ အဲဒါ လည်းပါတယ်။
ကျောင်းဆရာတွေလည်း သတိထား သင်းတို့လည်း တပည့်တို့ရေ ဆရာက ဆရာက နဲ့ အမှန် ဆို ကျောင်းဆရာဘဲ ကျောင်းကလေ ကျောင်းကလေ လို့ ပြောကြပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် မြန်မာစကားမှာ သမားတော်၊ ဆေးဆရာဝန်၊ ဆရာဝန်၊ ဆရာ စသည် အား ဖြင့် အစဉ်အလာ ရိုရိုသေသေ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ခေါ်ခဲ့ကြတာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ် မယုံရင် ဟိုးရှေးခေတ်က ရွှေသွေး ဂျာနယ် အဟောင်းကြီးတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါလား၊ သမားတော်ကြီး ဆိုတာနဲ့ ပေးတဲ့နာမည် ကိုက ဦးသီလ၊ ဦးပညာ၊ ဦးဝဏ္ဏ စသည်အားဖြင့် ဆွဲလိုက်ရင်လည်း ရင်ဖုံး တိုက်ပုံ နဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကားကားကြီး နဲ့ ဇာတ်လိုက်ကိုး ဒါပေမယ့် ဒါတွေကကြာပါပြီ။ သည်ခေတ်မှာ သင်းတို့ဇာတ်လိုက် မဟုတ်တော့ ဘူး အခု သင်းတို့က ဗီလိန်၊ အော့ကြောလန်၊ လူသတ်ကောင်၊ ဓါးပြ။ ဆရာဝန်တွေ အသက်ကယ်တယ် ကျေးဇူးရှိတယ် ဆိုတာ တွေက ဒိတ်အောက်နေပြီ။ အခု ခေတ် ကသင်းတို့ကို ဖဲ့ရမယ့်ခေတ်။ ကြိုက်တယ် ကျုပ်တော့ သိပ်ကြိုက်တယ်။ သင်းတို့မှာ ဘာကျေးဇူးမှ မရှိဘူး သင်းတို့ ကုလိုက်လို့ ဝေဒနာ သက်သာသွား ရင် ဘာမှကျေးဇူးတင်စရာ မလိုဘူး ဒါသူ့အလုပ်သူလုပ်တာ။ ကိုယ့်ကိုဆေးကု ပေးတဲ့ သူနဲ့ စလုံးမှာ အိုတွေကို ကြိမ်ရိုက်တဲ့ ဝန်ထမ်း နှစ်ယောက်လုံးကို တသဘောထည်းထားရမယ် ဟုတ်တယ် လေ နှစ်ယောက်လုံး ကကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ထမ်းနေကြတာ မဟုတ်လား။ ဒီသဘောပဲလေ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာမကလေးနဲ့ IQ တို့ JJ တို့က ဘာညာလေးတွေနဲ့ ကို တပုံစံထည်းဆက်ဆံ ရမယ်၊ ဟုတ်တယ် လေ နှစ်ယောက်လုံး ကကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ထမ်းနေကြတာ မဟုတ်လား။ ဓမ္မကထိက ဆြာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ မေဓါဝီလမ်းဆုံက အရက် ပုန်းရောင်းတဲ့ ဒေါ်ဒေါင်းကို တသဘောထည်း ထားရမယ်။ ဟုတ်တယ် လေ နှစ်ဦးလုံး ကကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ထမ်းနေကြတာ မဟုတ်လား။
ဆေးကုလို့ ငွေကုန်ရင်ငြီးငြူ ရမယ်။ ဆေးကုရင်းကုန်ကျတဲ့ စားရိတ် အားလုံးကို ဆိုင်ရာ ဒေါက်ဒေါက် နဲ့ပြလို့ ကုန်ကျငွေလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရမယ်။ ဟင်း ဟင်း …. ကတိမ်းကပါး ဖြစ် သွားလို့ကတော့ ဟင်းဟင်း ဟင်း ဟင်း…
ကိုယ်တွေ့တခု ပြောရဦးမယ် နယ်ကလူနာတယောက် ရန်ကုန်မှာဆေးလာကုတာ ကျုပ်တို့နဲ့ ၃ အိမ်ကျော်မှာတည်းတယ် ဒေါက်တာဇီးကွက်နဲ့လာပြတာ ၂ ရက်ပဲရှိသေးတယ် ၂ ပုံးကျော် မြောက်သွားပြီတဲ့ မေးကြည့်တော ကြီးတော်က ရွာကထွက်လာတည်းက ကျတဲ့ စားရိတ်တွေ ကိုပေါင်းထားတာကိုး ဟုတ်တယ်လေ ပေါင်းရမှာပေါ့ မော်တော်ခက … + … +…+ ဦးဇီးကွက် စမ်းသပ်ခ က ၅၀၀၀ + … + တိုင်စီခက … + ပေါင်းလိုက်တော့ အင်း ဒေါက်တာဇီးကွက် နဲ့ ကုတာ ၂ ပုံး။ ကြီးတော် ဦးဇီးကွက်တိုက်ရိုက်ယူတာက ၅၀၀၀ တည်းပါလား ဆိုတော့…… သိပါဘူးမောင်သာဂိရယ် ငါ သိတာတော့ အဲဒီဆရာကြီးနဲပြလိုက်တာ ၂ ပုံး ကုန်တာဘဲ။ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ မေးတာလည်း မဖြေဘူး၊ အချိန်လည်း မပေးဘူး၊ သက်လည်း မသက် သာဘူး ဘာဘူး ညာဘူးပေါ့ ဗျာ။ စစ်ထား ဆေးထား တဲ့ အဖြေ ရီဇတ်တွေ ကိုလည်း ရှင်းမပြ ဘူး၊ ပုရွက်ဆိတ်ကို မှင်သုတ်ပြီးလွှတ်လိုက်တဲ့
လက်ရေးကလည်း တလုံးမှ ဖတ်လို့ မရဘူး … ဘူး … ဘူး…. အဲလိုနဲ့ ၂ လ ၃ လ နေတော့ ရောက်လာကြပြန်ရော ဒီတခါလည်း ဦးဇီးကွက်ဆီ ဘဲ ထပ်ပြန်သွားကြတယ် ထုံးစံအတိုင်း မကျေနပ်ကြပြန်ဘူး အိုင်ဆေး ကျုပ်က မေးကြည့်တာပေါ့ မကြိုက်ဘူး အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင် ဦးဇီးကွက်ဆီကို မှ ဘာလို့ ပြန်သွားပြရ သလဲ ဆို တော့ …… ကြီးတော် ပြန်ဖြေတာက ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ၊် ငတို့ ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး တခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့ ..တဲ့။ ကြီးတော်ရေ ဘာရောဂါ လည်းဆိုတော့ အဆုတ်ကင်ဆာတဲ့။( အင်း အဆုတ်ကင်ဆာ ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကဒီးကဒီး ဖြစ်နေကျပါ ဆိုတဲ့ လူနာတော့ သိပ် မရှိဘူးပေါ့ဗျာ… ဒါပေမယ့်) ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သား လူနာလေ၊ ဘယ်သိနိုင် ပါ့မလဲ။ ဒါနဲ့ ကြီးတော်ရေ … စစ်ဆေးထားတဲ့ ရီဇတ်တွေ ကို ဦးဇီးကွက်ရှင်းမပြတော့ တခြားဆရာဝန် တယောက်ကို ပြကြည့် တိုင်ပင်သေးလားဆိုတော့ …… “ငတို့ ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး တခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့” …… အင်း ဟုတ်ပြီ …… ဒီရောဂါက ဦးဇီးကွက်နဲ့ပြမှလား တခြားအဆင်ပြေမယ့် ကိုယ့်ရွာနဲ့ ပိုနီးမယ့် သွားရလာရ တာအကုန်အကျ ပိုသက်သာမယ့် တခြား အော်တာနေ့တစ်… တစ် … တစ် …… ဒီမှာ ကြီးတော် တင်းလာပြီ …… မောင် ဝီလျှံ ကြီးတော်ပြောမယ် …… “ငတို့ ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး တခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့” …… ဒါပဲ ဘာမှလာပြီး အော်တာနေ့တစ် မနေနဲ့ မှန်တယ်လေ Patient is customer and customer is always right ဆိုမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကလည်း ရှည် ကို ရှည် တယ် (ကျုပ် ဇနီး အသိဆုံး) တမျိုးမထင်ပါနဲ့ စကားကြောရှည် တာကို ပြောတာ။ ဇနီးနဲ့က စကား အပြောဖြစ်ဆုံးမို့လား။ ကြီးတော် အဲဒီ ဒေါက်တာဇီးကွက်ဆိုတာက လူနာများလို့ ပေးရှင့် တဦးချင်းကို အချိန် မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် လမ်းထိပ်ကဆေးခန်းကလေး မှာ ညနေ ည နေ ဆို ရောက်လာ လက်ဖက်ရည်အချိုတခွက်သောက် ဂျာနယ်ကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် ၃ ခေါက်ဖတ် ၃ ခေါက်ပြည့် ရင်ပြန်တဲ့ ဒေါက်တာမောင်နှင်း ဆိုတာ သဘောကောင်းမယ့် ဒီဇိုင်းလေးပါ အလကားနေ အလကား သွားပွားကြည့် ပါလားဆိုတော့ ကြီးတော်က … … “ငတို့ ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး တခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့ … … … တော့ တော့”
“ကြီးတော် ကျုပ် ဘော်ဘော် ရဲ့ ဒက်ဒက် ဆို ၁ ပတ်တခါ သွေးချိန်ရင်း အဲဒီ ဒေါက်ဒေါက် လေး နဲ့ သွားပွား နေကျ သိချင်တာလေးတွေ ရှိရင်လည်းမေးလို့ရတာပေါ့ ဒေါက်ဒေါက် လေးက သူမသိတာဆိုရင်တောင် သူ့ ဆရာသမားတွေမေးလာပြီး ပြန်ဖြေနေကြ၊ ဆွေးနွေးမေးမြန်းခ လည်း တပြားမှမယူ အလကား (အခမဲ့) သူ့မှာလည်း ဂျာနယ်ကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ဖတ်နေရတာ ပျင်းနေတာဆိုတော့ ကြီးတော် ဆရာဝန် တယောက်နဲ့တိုင်ပင်ချင်တာဆိုရင် သင်းနဲ့ တမုန်းပွားပြီးမှ ပြန်လာ ရတယ် ဆိုတော့ ကြီးတော်က … … “ငတို့ ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး တခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့ … တော့ တော့”… မှန်ပါတယ် မမှန်လို့ မရဘူးလေ Patient is customer and customer is always right ဆိုမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကလည်း အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိတတ် တော့ “ကြီးတော် အဲဒီ ဒေါက်တာဇီးကွက် ဦးငွေမက် နဲ့ မှပြချင်တယ် ကြီးတော် မှာလည်း ငွေကြေးကအချောင်လည်ကြီး မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒေါက်တာဇီးကွက် တာဝန်ကျတဲ့
(…) ဆေးရုံကြီးဆိုတာ အခု ကြီးတော် ရဲ့တည်း အိမ်ကဆိုရင် ကြီးတော် သွားသွားပြနေတဲ့ မြို့ထဲ က ဆေးခန်းထက် အပုံကြီး တောင်နီးသေးတယ်၊ အဲဒီ အစိုးရဆေးရုံကြီးမှာ သွားပြရင် ကြီးတော်ရဲ့ ဒေါက်တာဇီးကွက် ကို ဘဲ စမ်းသပ်ခ အလကား (အခမဲ့) နဲ့ပြလို့ရတယ် ကျုပ်တူမကလေး အဲဒီလိုဘဲ သွား ပြတာ လူများတော့ စောင့်တော့ စောင့်ရတာပေါ့။ အပေါက်စောင့် အလုပ်သမား နပ်စ်မ ဟောက်တာတော့ ခံရတာပေါ့ ဆရာကြီးကတော့ အပြင်မှာလို မဟုတ်ဘူး သူ့တပည့်တွေ စာသင်ရင်း စာမေးရင်း ဆိုတော့ လူနာ ၁ ယောက်ကို ၅ မိနစ် လောက်ကနေ ၁၀ မိနစ် လောက်အထိ အချိန်ပေးတတ် တယ် တင်းလာပြီ ကြီးတော်က။ “ဟဲ့ ငတို့က ခံစားနေရတာ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ဟဲ့ ဒီဆရာဝန်တွေဟာငွေ စကား သိပ်ပြောတယ်” … “ကြီးတော်ရယ် အခုဟာက စမ်းသပ်ခ အလကား (အခမဲ့) လေ … … …”
“ဟဲ့ ဝီလျှံ၊ နင်ဘာသိလို့လဲ စမ်းခ မပေးရလည်း နင်တို့ (…) ရုံမှာ ဆေးကအလကားရလို့လား ဟိုစစ် ဒီစစ် ဟိုရိုက် ဒီရိုက် လုပ်ရဦးမယ်လေ အဲဒါတွေက အလကား ရလို့လား ပြီးတော့ (…) ဆေးရုံက ညစ်ပတ်က ပတ် နဲ့”
“ကြီးတော်ရယ် အဲဒါတွေကို ဆရာဝန်ကြီးက ဘယ်လိုလုပ်ပေး နိုင်ပါ့မလဲ”
“ဝီလျှံ ဘယ်လိုလုပ်တာတွေ ညာလိုလုပ်တာတွေ ငါမသိဘူး ပေါက်ပေါက် ရှာရှာတွေမမေးနဲ့ ဆေးဝါး အတု အစစ်၊ ဆေးဖိုး၊ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ဓါတ်မှန် ဟိုဘိုး ဒီဘိုး ငါဘာမှ မသိဘူး သိလဲ မသိ ချင်ဘူး ဆေးရုံ ဆေးခန်း မှာ တခုခု အဆင် မပြေဖြစ် ရင် ဆရာဝန့် ခေါင်းဘဲ တခြားဝန်ထမ်းတွေ ကို ငါလည်း မသိဘူး ခေါ်လည်း မခေါ်တတ်ဘူး တခုခု အဆင် မပြေဖြစ် ရင် ဆရာဝန့် ခေါင်းဘဲ”
“နင်ကကော ဘာသိလို့လဲ ငတို့ တူကလေး သွားနေတဲ့ ဇီဇီ မှာဆိုရင် …. …. ငတို့ တူမကလေး ရောက်နေတဲ့ ကေကေ မှာ ဆိုရင် … အက်စ်အက်စ် မှာ ဆို ရင် …… စလုံးမှာ ဆိုရင် …. ဆိုရင် … ဆိုရင်”
“အခု ငတို့ ဆီမှာ ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကြီး တခုလုံး ချွတ်ခြုံကျ နေတာဟာ ဆရာဝန်ကြောင့် ဘဲ ဒါဘဲ တခြား ဘယ်သူ့ကြောင့် မှမဟုတ်ဘူး။ ဝီလျှံရေ ဒါဘဲ ဟိုဟာကြက်။”
အင်းကြီးတော် ပြောတာ မှန်တော့မှန်တာပါဘဲ Customer is always right လို့ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား။
“ဒီမှာ ငသာဂိ ကြီးတော့် သဘောထားကို အပြတ်ပြောလိုက်မယ်”
“ ဆရာဝန် ဆရာဝန်မ အပေါင်းကို ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ် ချေမှုန်းကြ”
“ အမုန်းတရားကို အခြေခံ၍ ဣသာမစ္ဆရိယ စိတ်ကို ဘက်စုံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး”
ရေး … ရေး ဟေးဟေး ဟေး
well, laughing unstoppable again! You haveagreat sense of humor.